Mega Chat na Telegram, gịnị kpatara anyị ji chọọ Hangouts ma ọ bụ WhatsApp? | Site na Linux
Mega Chat na Telegram, gịnị kpatara anyị ji chọọ Hangouts ma ọ bụ WhatsApp?
Luckily maka ọtụtụ (na dị mwute ikwu na ndị ọzọ) na anyị na-ebi n'oge ebe ọ na-esiwanye mkpa iji chebe ozi anyị na-ekerịta. Anyị nọ n'oge nke Wikileaks na Snowden, na ebe ụfọdụ ọrụ ndị a kacha eji eme ihe dị ka Facebook, ma ọ bụ ndị Google nyere, na-aga n'ihu na-ekpuchi nzuzo nke ndị ọrụ, ndị ọzọ apụtawo iji kpuchido data anyị ma ọ bụ nkwukọrịta anyị na ndị enyi na ezinụlọ .
1 Mega Chat dị ka onye nnọchi nke Google Hangout
2 Telegram dị ka onye nnọchi nke WhatsApp
Mega Chat dị ka onye nnọchi nke Google Hangout
N'agbanyeghị ebubo enweghị nke Kim Dotcom, Mega Ọ ka bụ ọrụ magburu onwe ya, a na-ejikwa ya karịa, agbanyeghị na m ghọtara, ọ bụghị OpenSource, yabụ enwere ike ịnwe nsogbu ọ bụla. Mana ọ bụrụ na tupu anyị ebugo ma budata faịlụ anyị n'enweghị nsogbu, ugbu a, anyị nwere ike ịgwa ndị enyi anyị, ndị ezinụlọ anyị ma ọ bụ ndị ahịa anyị okwu, na-enweghị nchegbu ọ bụla (o doro anya).
Mega Nkata Ọ bụ ezigbo nnọchi maka Google Hangout, mana ugbu a, ị nwere ike ịkpọ oku na vidiyo vidiyo naanị, ma gosipụta ya, ihe mbụ anyị ga-eme bụ ịgbakwunye adreesị ozi-e nke onye anyị chọrọ ịgwa.
Ozugbo emere nke a, anyị nwere ike ịme nkwukọrịta site na ịkpọ kọntaktị anyị.
Ọ dị mma ịkọwapụta na ọrụ a dị na beta phase ma ọ nọ na url dị iche na nke anyị jirila ugbu a. Iji nweta ọrụ mega na-emebu ka anyị mee ya https://mega.co.nz, iji nweta ọrụ ọhụrụ bụ https://mega.nz.
Telegram dị ka onye nnọchi nke WhatsApp
Whatsapp Ọ dịghị mkpa iwebata, mana ọ sitere na ọrụ dị jụụ gaa na ọrụ akwụ ụgwọ, yana iji bulie ya elu, enweghị ya na nyiwe niile.
Ugbu a ọ na-enyo na isntanetị gbanwere n'ihi na WhatsApp na-ebupụta ọrụ ya n'ịntanetị, ya mere, anyị nwere ike ịnweta site na kọmputa anyị na GNU / Linux, ma ee, na-agbaso usoro nke ọtụtụ ọrụ na weebụsaịtị ndị ọzọ, naanị site na Google Chrome, ya mere: fuck you !!
Ma lee! Telegram bụghị naanị nwere ihe nhọrọ karịa WhatsApp, ma ọ bụ cross-ikpo okwu na-nwere a web version iji nweta ihe nchọgharị ahụ.
Onye ahịa nke GNU / Linux na-emeziwanye na ọ bụghị naanị nke ahụ, o doro anya na Telegram ga-enye Ubuntu nkwado gọọmentị. Yabụ, a na-arụ ọrụ ndị ahụ, ọ dabere na anyị ịkwalite ha ka ndị ọzọ ndị kwere naanị na Facebook, Hangout, WhatsApp, wdg dịrị, chọpụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Mega Chat na Telegram, gịnị kpatara anyị ji chọọ Hangouts ma ọ bụ WhatsApp?
Enwekwara Ndewo sitere Firefox 🙂
Zaghachi na Derp
talky.io na webrtc kwa
Adị m umengwụ ịbanye maka ọrụ ọzọ na WebRTC ma ọ bụ ya mere m ji họrọ Firefox Ndewo.
O nwebeghị mgbe ọ rụụrụ m ọrụ!
N'okwu m, Firefox Hello arụgoro m Iceweasel ọrụ ebube. Ihe bụ nsogbu bụ na n'ezie nkata protocol maka nkata nkwukọrịta vidiyo na-egbochi ISP ị nwere.
Telegram, maka m, nwere oke ọghọm: enweghị onye ahịa maka Symbian S60v3, mgbe enwere WhatsApp, Line na Skype, dịka ọmụmaatụ.
Iji gosipụta ọrụ mmeghe, nke dakọtara, nke nwere obi iru ala, nke kwụsiri ike, nke ezighi ezi ma dịkwa mfe ịgbasa, gịnị kpatara Jabber / XMPP?
Mana ka m ghọtara ya, ị nwere ike ịmepụta ndị ahịa na-enweghị nsogbu n'ihi na akụkụ nke koodu ahụ na-emeghe. Just ga-achọ ụfọdụ ndị mmepe Symbian ka ha mee nke ahụ. Ọ bụrụ na ha ewepụtaghị ya, ọ bụ maka na enweghị mkpa na mpaghara ahụ, ọ dị m ka.
XMPP anaghị arụ ọrụ nke ọma n’ihi na ọ gbadoghi ụkwụ n’akwụkwọ ekwentị, nke bụ ihe mmadụ niile nwere. Na Telegram web interface m nwaleghị site na Symbian nchọgharị mana na tiori ọ ga-arụ ọrụ. N'ọnọdụ ọ bụla, agaghị m etinye otu ụzọ n'ụzọ iri na sistemụ arụmọrụ na 2016 agaghịzi enwe nkwado gọọmentị n'ụdị ọ bụla.
Kedu ihe kpatara na onye ọbụla amaghị etu esi eme mmemme anaghị eme nke a? 1.- Onye nkesa nwere ndepụta nke ekwentị mkpanaaka jikọtara na akaụntụ xmpp na nchekwa data na-enweghị ike ịnweta, 2.- onye ahịa xmpp na-ajụ onye ọrụ ma ọ nwere akaụntụ xmpp ma ọ bụrụ na ọ nweghị, mepụta ya na usoro abụọ na ihe nkesa jabber (ndepụta nke otutu) nke onye oru choro na-achoghi ozo (meputa nọmba akaụntụ tlf @ ihe nkesa) (rue ugbua ihe onye ahia obula na-eme) ma ziga ya na ihe nkesa (1) MOBILE-accountXMPP. 3.- Onye ahịa zitere ndepụta nke mobiles ka a chọọ ya na sava (1) yana ekwentị nke ya. 4.- Ihe nkesa na-aza na SMS na mobile na-ajụ na a random paswọọdụ 5.- The ahịa omume na-agụ SMS paswọọdụ na-eziga paswọọdụ na Server. 6.- Ozugbo Server na-anata paswọọdụ, ọ na-enye ohere ka ndị ahịa omume nweta akaụntụ metụtara na ndepụta nke mobiles.
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla, tinye mpaghara nke atọ na sava ahụ maka mmasị onye nwe ihe na-emegharị ka ndị ọzọ nwee ike itinye ya na akpaghị aka ma ọ bụ. Ya mere, a ga-enye nhọrọ na nhọrọ, hapụ ya onye ọrụ ahụ ka ịgbakwunye kọntaktị ha n'otu n'otu (ndị ha chọrọ) na-enye ha akaụntụ kwekọrọ na XMPP ha. Nye onye ahịa ohere ị gbakwunye kọntaktị site na akaụntụ XMPP nanị, n'azụ ihe nkesa (1). Ya mere sava ahụ (1) bụ naanị njikọ iji kwado mgbasawanye nke ọrụ ahụ na akpaghị aka site na atụmatụ ndị ọrụ.
Na-ekwenye kpamkpam, m nọ n'otu ọwa ahụ ma na-atụ aro ndị enyi m telegram ogologo oge. Na isiokwu gị nhọrọ ndị ọzọ
I chefuru ikwu na enwere ike iji Telegram na pidgin na Linux! Maka m nke ahụ bụ uru na ọ na-akụ ọrụ ọ bụla ọzọ.
Na m ikpe na Telegram na-arụ ọrụ maka kọmputa bụ karịa ezuru, otú ị na-adịghị na-eji ya na mobile elu na ala xD
Telegram nwere chats echekwara (n'ezie) na ị nwekwara ike izipu Ọ B fileLA faịlụ (ọ bụghị naanị ihe oyiyi-obere mkpebi- ma ọ bụ vidiyo -a njọ mkpebi-)
Ha na-ebibikwa onwe ha n'oge ụfọdụ ma onye ọrụ họọrọ ya nke ọma. Nke zuru oke maka ozi agaghị ekwe omume.
Eziokwu, mana izo ya ezo si na njedebe anaghị arụ ọrụ site na ndabara. Site na izo ya ezo nke WhatsApp ugbu a, nke mepere Open Whisper Systems, ee. Na mgbakwunye, Telegram ka anaghị ebipụta koodu nke ngwanrọ nke sava ya na-eji, n'ihi ya, ọ bụghị ihe doro anya ka ha na-eme na mkparịta ụka anyị. WhatsApp na-ejikwa ngwanrọ emechiri emechi, mana Open Whisper Systems encryption bụ mpaghara, ọ bụ decri, na ngwaọrụ ahụ, ma mgbe ọ ruru WhatsApp sava ozi anyị etinyelarị ezoro ezo na igodo nke bi naanị na ngwaọrụ anyị, ergo enweghị onye ọ bụla belụsọ onye natara ya. ozi nwere ike imebi ha.
N'ihi ya, n'agbanyeghị na ọ na-ewute anyị, nke bụ eziokwu bụ na taa, WhatsApp na-eji a ọzọ nchebe na a pụrụ ịdabere na izo ya ezo karịa Telegram, n'ihi na ọ encrypts mkparịta ụka niile na mpaghara, ọ bụghị naanị ndị anyị na-na-na rụọ ọrụ otu nhọrọ na-amalite a «ala chat», Dị ka Telegram. Ihe niile a na-eche na ngwa WhatsApp na-eme ihe ọ na-ekwu na ọ naghị e copyomi mkparịta ụka anyị tupu ezoro ezo ma ziga akwụkwọ ahụ ezoro ezo na sava ha ma ọ bụ na ị maara, nke ahụ bụ nnukwu ihe egwu nke ngwanrọ mechiri emechi, na ọ nweghị onye ọ bụla belụsọ onye nrụpụta n'ezie mara ihe ọ na-eme.
Na ngụkọta, na emechiri WhatsApp kpamkpam, Telegram ịbụ ọkara mechiri emechi, anyị enweghị ike ịtụkwasị onye ọ bụla n'ime ha obi.
E wezụga nke a, eziokwu bụ na Telegram ka mma: ị na-eziga ihe ịchọrọ ma na-enweghị ogo nke foto na-emejọ gị, ị mechie ma banye mgbe na ebe ịchọrọ, ị na-ahapụ onye ịchọrọ ịhụ ọkwa gị, kpọtụrụ site na kọntaktị… Ọ bụ ihe nwute na ọ dị ka ọ nwere ike ịnwe ngwa zuru oke: ihe otu onye nwere, onye ọzọ enweghị na ntụgharị. Telegram nwere ọrụ kachasị mma, mana nchekwa kacha mma, m na-ekwughachi ya, na-eche na WhatsApp na-arụ ọrụ dịka ha na-ekwu, WhatsApp nwere.
Ihe omume kachasị mma n'echiche a, maka ekwentị mkpanaaka, ebe ọ bụ na n'oge a, echere m na ọ nweghị onye ahịa maka kọmputa (Echere m na n'ihi ọnụ ọgụgụ dị ala nke ndị ọrụ, ebe ọ bụ na ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ ọ bụla agaghị enwe nsogbu) enweghị enwere obi abụọ na ngwa ahụ sitere na Open Whisper Systems: TextSecure ( https://whispersystems.org/blog/the-new-textsecure/ ) ma ọ bụrụ na mmadụ ole na ole na-eji Telegram, mmadụ ole na-eji TextSecure? N'ezie, enweghị m otu onye n'ime kọntaktị m na-eji ya. : - /
Ọmarịcha. Ugbu a, ọ na - ebipụta post metụtara TextSecure (M ga - ebipụta ugbua post metụtara ezigbo ikpe nke emeghere emezighị emezi nke WhatsApp na mmebi nke onye nwe ekwentị).
M na-eji ederede ederede mana ọ bụ n'ezie izipu sms, nke na-ezighi ezi ma e wezụga mgbe nke ọzọ na-ejikwa ederede. N'aka ozo, nchekwa na nkasi obi n'aga aka n'otu oge.
Na F-Droid na Prism ezumike ha ekwenyeghi nke ukwuu:
Echere m na ọ dị njọ karịa WhatsApp ebe ọ bụ na ngwa ahụ ọbụlagodi n'efu, mana ọ na-aga n'ihu na-echekwa nọmba ekwentị anyị na nke ndị kọntaktị anyị, yana sava ya na-eji ngwanrọ emechiri emechi, yabụ anyị enweghị ike ịtụkwasị obi. : - /
Nhọrọ a pụrụ ịnakwere bụ TextSecure (whispersystems.org/blog/the-new-textsecure/) na Chatsecure (guardianproject.info/apps/chatsecure), mana ị maara onye ọ bụla na-eji TextSecure? Anaghị m. Na ChatSecure, n'ihi na iji akaụntụ izi ozi ọ bụla dabere na XMPP (Autistici, Openmailbox, Google, Facebook, GMX, Jabber, wdg) ọ ga-arụ ọrụ, sikwa na ngwaọrụ ọ bụla, ọ bụghị naanị na mkpanaka, kamakwa, mmadụ ole, ma e jiri ya tụnyere ya. onye na-eji WhatsApp, ị na-eji nkata nke ndị ọzọ a? N'ihi na mgbe m kwuru na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-enye email na-ezoro ezo dị ka Autistici.org, Openmailbox.org, na azụmahịa ndị ọzọ dị ka GMX.es, Gmail na ndị ọzọ na-etinye ọrụ nkata XMPP naanị na akaụntụ email ha ha na-ele m anya dịka a ga-asị na ha ga-ekwu okwu Chinese, yabụ na ha amaghị na ha nwere ike iji nkata jiri Gmail akaụntụ na-ekwurịtaghị na Hangouts.
Ọ bụ ihe ihere, n’ezie. : - /
PS: Shit ... ihe ndekọ a na-ekwu na m na-ede spam. Kemgbe ole mgbe ka ederede na isi mmalite spam? Kedu ihe na-emebi gị, n'ezie!
Mmezu nke gmail na-eji nke XMPP jọgburu onwe ya, ozi ndị ahụ na-erute gị ma ọ bụrụ na ị jikọtara ya na onye ahịa jabber, mana ị chọpụtaghị na ha zitere gị ozi ... ruo mgbe ị na-eme hangouts
Mana enwere ndị ahịa XMPP ọ bụla ruru ọrụ ahụ? Echere m, ọ na-eme ka ọ dị mfe izipu ma zipu foto na vidiyo yana ederede, ma mee ka ọ dị mfe ịchọta kọntaktị site na akwụkwọ ndekọ ekwentị gị. Enweelarị m na ozi ọzọ ụzọ etiti eme ya, mana site na ọrụ ọchụchọ site na nọmba mkpanaka, enwere ike ịme sava kesara (ndepụta nke etiti abụghị mkpanaka kama ọ bụ sava iji chọọ).
Prism ezumike gwa Abigel ChatSecure dị ka ndị ahịa enyi maka ndị hụrụ sava XMPP / Jabber n'anya.
Guillermo, echere m na ị pụtara ngwa mkpanaka, ebe ị nwere KTP ma ọ bụ Pidgin maka desktọọpụ, n'etiti ndị ọzọ. Anaghịzi m eji XMPP maka obere ihe kpatara na NOBODY, na anaghị m ekwubiga okwu ókè, ọ dịghị onye kọntaktị m na-eji ya, mana nwa oge m kwenyesiri ike na enyi m nwanyị jiri ya n'etiti onwe anyị, maka ekwentị anyị ji Chatsecure:
Ekekọrịtare faịlụ ma zipụ otu ihe ahụ na WhatsApp na ngalaba. Lelee, ọ bụrụ na ị nwere mmasị.
Ogechukwu3000. Ee, ejiri m ya ruo oge ụfọdụ ma ọ na - arụ ọrụ n’enweghị nsogbu. Nsogbu bụ na o siri ike na onye ọ bụla na-eji XMPP. Akwụpụrụ m Chatsecure n'ihi na m na-eji ya naanị mkparịta ụka mụ na enyi m nwanyị ruo mgbe WhatsApp nakweere ihe nzuzo Openwhispersystems, nke ha na-ekwu bụ otu n'ime nchekwa kachasị mma, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke kachasị, ebe ahụ taa, anyị wee laghachi WhatsApp maka ezigbo ihe. . Ihere, mana ịnwe mmemme iji soro otu onye kparịta ụka ma nwee ịgbanwee gaa "guasap" mgbe ịchọrọ ịgwa onye ọzọ okwu, ma ọ bụ sonye n'otu, ma ọ bụ zigara faịlụ ọtụtụ mmadụ, ọ bụ igbu oge; na oge bu ndu, ya na ihe mgbu nile nke uwa m nwere ikwu na XMPP. Ọ bụrụ na a kwalitere XMPP site na mbido dị ka onye nnọchi nke SMS ma ọ bụghị dị ka onye na-achọ ịlụ ọgụ na WhatsApp mgbe ọ malitere ịmalite ịchị, ikekwe ihe ga-adị iche, mana na ihe ndị a, onye ọ bụla nke buru ụzọ bịa bụrụ eze. : - /
Ka m na-agbakwunye mmadụ, Achọrọ m ịhụ ka o si arụ ọrụ 🙂
Ọ bụrụ n’inwere onye na - eji ya eme ihe, ọ ga - egosi na akpaghị aka, yana guasap, mana ha ga - enyefe gị nọmba ekwentị ma ọ bụ aha otutu.
Ọ bụrụ na ị pụtara mega, echere m na ị nọ na mail ya c:
Telegram dị mma, mana megaChat ewepụtaghị koodu ya, ọ bụ otu ọzọ mana ọ kabeghị ntụkwasị obi nye m.
Telegram dị mma, ahụrụ m ya n'anya! Mana enweghị m kọntaktị (naanị anọ), ọ bụ ya mere anaghị m eji ya. Onye ọ bụla m maara na-eji WhatsApp ma ha anaghị ezube ịgbanwe, n'ihi na ọ na-arụ ọrụ maka ha, ihe ihere.
Emere m ka ọ dị mfe mgbe fb zụtara guasap m ewepụ ya, site n'oge ahụ onye chọrọ ịkpọtụrụ m ga-eme ya site na sms, mail ma ọ bụ Telegram, n'ikpeazụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kọntaktị niile m na-agwa okwu na-ejedebe na ịwụnye Telegram
Ọfọn, ndị kọntaktị m, ọ bụrụ na anaghị m eji ngwa whats, ha na-eji Facebook ma ọ bụrụ na anaghị m eji Facebook, ha ga-ezitere m email ma ọ bụrụ na ha ejighi email, ruo na xD kachasị ziga m SMS na n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ekwentị, ha enwerelarị n'efu
Na-amasị m gị: Warrinap? Enweghị egwu. Kedu onye chọrọ ịkpọtụrụ m, ma ghara ikwu okwu nzuzu ọ bụla 5 ọ bụla, na-eme ya site na LINE, Hangouts, Telegram ma ọ bụ SMS. Uzo ozo di nma nke nwere otutu ihe. Ma na Spen ihe jupụtara na ya bụ amaghị ihe na teknụzụ na atụrụ, kedụ ndị ọrụ Warrinap ole ka ị nwere ike ịkpọ ndị ahịa ndị ọzọ na-ezisa ozi ozigbo? Gbalịa hụ (LINE anaghị agụta, hahaha).
Nke ahụ achọworị ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya ọ bụghị mmemme
enwekwara jitsi nke bu ihe mepere emepe ma burukwa ihe na gnu / Linux
nchịkọta maka gam akporo anwụọla, nke kachasị ọhụrụ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ ma ọ bụghị kwụsie ike
Nwa afọ abụghị, kama ka anyị kwuo na ekele maka JAVA enwere ike ịgba ya na Linux. 😀
Nwara na openSUSE 13.1 + Samsung Galaxy Note 4 + Samsung Galaxy S5 + Samsung Galaxy S3 (mgbọrọgwụ CyanogenMod)… ruo ugbu a ihe niile na-arụ ọrụ dị ka akọwara.
Enyi, ego i fọdụla you nwere Ndetu 4 na S5? Nne chukwu xd
Nnukwu ụzọ abụọ dị ukwuu maka nnukwu nnukwu ama ama, na Spain ha na-eji telegram karịa ma ana m ekele ha maka nke ahụ na mgbakwunye na ịnwekwu ike izipu faịlụ, n'ihe gbasara mkparịta ụka mega, Abụghị m onye na-agba ume maka nke ahụ, ọ ka mma jiri skype XD.
Zaghachi ka thanatoz666
Wụpụ site na silo emechiri emechi (WhatsApp na Hangouts) na silo ọzọ mechiri emechi (Telegram na MegaChat) abụghị ihe ọchị. N'okwu ahụ, ọ ka mma ịwụli iji mepee netwọk dịka Jabber na SIP.
Ana m efu firefox hello, a na m anwale ya na ọ magburu onwe! Ọbụna kpọtụrụ m na mbadamba nkume na-etinye firefox na ọ na-arụ ọrụ nke ọma 🙂
Echere m na ọ bụ nke nwere ọdịnihu, ọkachasị n'ihi na ọ chọghị ndebanye aha. naanị gafere njikọ na voila ...
Tox ndị nwem, Tox: https://tox.im/es
Zaghachi Jon Burrows
N'oge a A na-akwụsị Tox maka gam akporo
BUSR R RLỌ RESSIA !!!!!!
Obere ihe ijuanya na na ọkwa ndị ọzọ ha na-eto onwe ha ma na-arahụ maka goole na ndị ọzọ amaara m nke ndị ọzọ anaghị akwụ ụgwọ mana ana m eto atụmatụ ahụ ma na-atụ anya na ị ga-ahụ ndị ọzọ nweere onwe ha na google yana obere otuto na ụlọ ọrụ a nke hà ma ọ bụ ka njọ karịa Microsoft
Obere akwukwo dijo
Nsogbu dị na Telegram bụ na ọtụtụ ndị anaghị eji ya dị ka WhatsApp. N’ime ndị enyi m na ndị enyi m, onye ọ bụla na-eji WhatsApp, yabụ ọ bụrụ na m chọrọ ịga Telegram ọ ga-abụ ihe mgbaka ebe ọ bụ na ọ dịghị onye n’ime ha jiri ya.
N'agbanyeghị nke ahụ, enweghị m ike ime ka onye ọ bụla kwenye na telegram n'ihi na ọ dịghị onye na-eji ya!
Ndị folks na KTP na-emepe ngwa mgbakwunye maka Telegram, ịghara ịkọ ndị ọrụ gọọmentị nke nọ kemgbe oge ụfọdụ maka Linux. Mana agbanyeghị, eziokwu ahụ bụ na ndị sava ha na-aga n'ihu na-emechi koodu na-eme ka m laghachi azụ, ọkachasị mgbe WhatsApp nwere onye ọ bụla na nso nso a ha mechara mejuputa nzuzo nzuzo, n'eziokwu ndị kasị dịrị nchebe dị adị, ha na-ekwu, ma meghee kpamkpam. https://whispersystems.org/blog/whatsapp/
Nsogbu bụ na nzuzo nzuzo nwere ike imeghe ka anyị siri chọọ mana ọ bụrụ na usoro nkwukọrịta adịghị, anyị agaghị enwe ike ịnwe "egwuregwu" ahụ na desktọọpụ ruo mgbe Facebook chọrọ ya.
Ọ bụ ihe ihere na ndị mmadụ achọpụtabeghị na XMPP nwere izo ya ezo OTR nwere ike iji ya na ekwentị mkpanaaka kemgbe WhatsApp, Telegram, Line, Spotbros, wdg. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe taa anyị agaghị adabere na ụlọ ọrụ ndị a yana ndị ahịa desktọọpụ ọ bụla anyị nwere mkparịta ụka na ekwentị mkpanaaka.
Site n'ụzọ, ụlọ ọrụ na-etolite protocol nke na-eji egwuregwu eme ihe ugbu a na-ezochi nwekwara ozi na ngwa mkparịta ụka olu, mana Chineke anaghị eji ha. Ọ bụ ihe ihere: https://whispersystems.org/#privacy
Ihe m na-ekwu kemgbe ọtụtụ afọ: anyị niile kwesịrị iji XMPP, ya na onye ahịa na nke ọ bụla nwere mmasị karịa, mana ihe niile dakọtara na otu protocol.
Ma mba: izizi, MSN Messenger, ma ugbu a WA. ó_ò
6 afọ gara aga m debanyere aha na Facebook ya mere ọ bụ ihe ọhụrụ nye m, na afọ ndị gara aga ndị enyi m na-agbakwunye m n'oge a niile, ma ọ bụrụ na ọ bụghị n'ihi na m jikọtara kọntaktị m site na MSN na Facebook na oge, adịlarị nzuzo.
Ọ bụrụ na ndị agbataobi na-akwado usoro a na sistemụ ya maka pọd ya niile, yabụ ọ ga - abụrịrị onye ga - ewepụ Facebook (iti Ello ezughi oke).
Ndị Telegram kwere nkwa ịhapụ koodu nke akụkụ Server ozugbo ha mere ka ọ kwụsie ike. Ma ọ dịkarịa ala nke ahụ na-abịa dị ka data gọọmentị na ibe mmemme ahụ.
Telegram na-enyekwa onyinye nke 200 puku dollar maka onye ọ bụla jisiri ike kparịta ụka. Ọ ga-amasị m ịhụ ma ndị nọ na WhatsApp nwere ike ịnwe ụdị ule a.
Ndị nke WhatsApp achọghị ya, ebe ọ bụ na ọ dịtụ mfe (adịlarị blog nke "Onye sayensị sayensị kọmputa nke ihe ọjọọ" egosiwo na ọ bụ ngwangwa na-eji na njedebe nke mmemme na-eme ka ịba uru).
Dị ka a ga-asị na nke ahụ ezughi, ruo ugbu a, m ka na-eche ma ọ bụrụ na ha arara onwe ha nye nnukwu ahụhụ ahụ na otu blogger a takenuru mmiri.
Kpọmkwem! Ha na-ewere uru kwesiri ekwesi na ọ bụ otu ihe ahụ. whatsapp kacha njọ. M ga-arapara na Telegram nke, ejiri m n'aka, ga-emecha hapụ koodu maka akụkụ sava ahụ.
"Ọ bụghị OpenSource, yabụ enwere ike ịnwe nsogbu ọ bụla"
Dịka ọmụmaatụ, anyị amaghị ihe ha na-eme na mkparịta ụka anyị ma ọ bụ ndị anyị na-akpakọrịta. Mkparịta ụka ahụ, ọ bụrụ na ha si na ngwaọrụ anyị ezoro ezo n'ezie, ọ gaghị echegbu onwe ya, mana na oge ọ bụla anyị gbakwunye kọntaktị data ha na-aga ụfọdụ ụdị faịlụ "nnukwu data", n'ihi na ọ bụghị nke ọma. Ma n'ezie, nsogbu bụ na ebe ọ bụ na ọ naghị emepe emepe, anyị amaghị n'ezie ihe ihe niile na-eme. N'ezie, ọ nwere ike ịbụ na ha anaghị eji izo ya ezo nke ọ na-azọrọ na ọ na-eji, yana dịka ọmụmaatụ ọ na-eji nkụda mmụọ nke dị mfe ịkwụsị site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi dijitalụ, ozi nzuzo, ma ọ bụ site na Mega n'onwe ya.
Ka o sina dị, ihe dị iche bụ na anyị ga-atụkwasị Mega obi n’ihi na anyị enweghị ụzọ mmadụ ga-esi mara ma sọftụwia ya ọ na - eme ihe ọ na - ekwu; nke uzo ozo mepere emepe, anyi kwesiri inyocha na obu eziokwu na koodu ha na-eme ihe ha na-ekwu n'ihi na koodu di n'ebe ahu ka onye obula hu (ma obu tukwasi ndi mmadu aka na ya, ma oburu na anyi amaghi mmemme, n'ezie, ebe obu ọtụtụ ndị mmadụ si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa, ebe ọ na-esiri ha ike na a "zụtara" ha niile iji duhie ọha mmadụ).
Agbanyeghị, ekwesịrị ikwu na ebe ọ bụ na Google, Dropbox, Box, na ndị otu ahụ niile na-enyo m enyo, mana achọrọ m ịmegharị okwukwe na ntụkwasị obi karịa Mega na 50 GB na-enweghị ike ịgbagha. Na mkpokọta, ọ dịghị ihe dị mkpa iji bulite igwe ojii, yabụ iji bulite egwu, asịrị asịrị nke "egwuregwu", vidiyo, ihe nkiri na ndị dị otu a, ọ naghị esiri m ike ịma ma ha rube isi na nkwupụta ha banyere mkpa nke nzuzo. Isiokwu ọzọ ga-abụ mkparịta ụka, mana ebe ọ bụ na WhatsApp agbanweela ihe nzuzo Openwhispersystems, yana na ọ ga-enye mkparịta ụka olu ezoro ezo n'oge na-adịghị anya, n'ihi na n'ikpeazụ ọ ga-apụta na WhatsApp ga-abụ ngwa nkwukọrịta kachasị echekwa. Onye ga-ekwu ya.
Nkata ngwa dijo
Onwe m, m ka na-eji Google Hangouts n'ihi eziokwu ahụ ọ na-enye m ohere ịkpọ oku vidiyo otu, ihe obere ngwaọrụ na-enye.
FirefoxOS anwụọla? FirefoxOS dị ndụ?
Debe ụfọdụ mmetụta na KDE iji gosi ndị enyi gị